Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Man United Oo Ka Baxday Xiisaha Jules Kounde, Cheslea Oo Saxiix Cusub Sameeneysa Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Man United oo ka baxday xiisaha Jules Kounde, Cheslea oo Saxiix Cusub Sameeneysa iyo Qodobo kale
July 3, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Heshiiska Arsenal ee daafaca dhexe ee Brighton Ben White waa mid dhameystiran, waxaana la filayaa in la dhameystiro wixii ka dambeeya Euro 2020, inkastoo ay xiiso u qabaan kooxaha Everton iyo Manchester City 23 jirkaan reer England. (Football.london)
Manchester United ayaa u gacan galisay kooxaha Tottenham iyo Arsenal xiisaha ay u qabaan saxiixa xidiga Sevilla ee Jules Kounde iyaga oo qaboojiyay xiisaha ay u qabaan 22 jirka daafaca dhexe ee reer France iyaga oo diirada saaraya heshiiska Real Madrid ee Raphael Varane. (Express) )
Weeraryahanka heerka caalami ee Czech Republic Patrik Schick ayaa u muuqday mid diirada u saaran kooxda AC Milan. TMW
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka fiirsanaya inay u soo bandhigaan 28 jirka khadka dhexe Paul Pogba qeyb ka mid ah heshiiska ay kula soo wareegayaan saaxiibkiis France Varane. (AS)
Arsenal ayaa isha ku heysa daaficii hore ee Real Madrid Sergio Ramos waxaana ay codsadeen in loo daayo wararka la xiriira 35 jirkaan reer Spain ee wadahadalada kula jira Paris St-Germain. (Goal)
Ramos ayaa diiday dalab 10 milyan oo ginni ah oo uga yimid Manchester United ka dib wadahadalo uu la yeeshay Red Devils, waxaana uu haatan u muuqdaa inuu ku biirayo PSG heshiis labo sano ah. (Mirror)
Goolhayaha reer Spain David de Gea, oo 30 jir ah, ayaa waxaa ka go’an inuu sii joogo Manchester United inkastoo tartan loogu jiro boosaska Old Trafford ay sii kordhayaan ka dib soo laabashadii goolhayihii hore ee England Tom Heaton,ka dib markii laga soo fasaxay Aston Villa. (Times)
Manchester United ayaa diyaar u ah inay bixiso 26 milyan oo ginni si ay u hesho xiddiga Inter Milan Marcelo Brozovic laakiin waxaa laga yaabaa inay tartan kala kulmaan Barcelona oo ku aadan 28 jirkaan khadka dhexe ee reer Croatia. (DailStar)
Tababaraha cusub ee Tottenham Nuno Espirito Santo ayaa doonaya inuu la kulmo Harry Kane, oo 27 jir ah, si uu ugala hadlo mustaqbalka ciyaaryahanka reer England Spurs ka hor inta uusan weeraryahankan tagin Euro 2020. (ESPN)
Daafaca dhexe ee reer Belgium Toby Alderweireld, oo 32 jir ah ayaa u sheegay Tottenham inuu raadinayo inuu ka tago kooxda Spurs ayayna u badan tahay inaysan hor istaagi doonin wadadiisa haddii ay helaan dalab ku habboon. (TheAthletic)
Arsenal ayaa si dhow ula socota ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sheffield United Sander Berge, oo 23 jir ah, laakiin Gunners ayaa tartan kala kulmeysa Liverpool, Lazio iyo Napoli oo ku aadan saxiixa xiddiga reer Norway. (thesun)
Daafaca Arsenal ee 20 jirka ah William Saliba oo lala xiriirinayay kooxaha Newcastle United iyo Lille ayaa qarka u saaran inuu amaah ugu biiro kooxda Marseille . (Theathletic)
Tottenham ayaa wadahadalo la furtay Bologna oo ku aadan heshiiska 22 jirka daafaca reer Japan Takehiro Tomiyasu. (Football.london)
Manchester United ayaa soo afjartay dadaalkii ay kula soo saxiixaneysay 24 jirka garabka uga ciyaara kooxda Barcelona Ousmane Dembele ka dib markii ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France uu garoomada ka maqnaan doono ilaa afar bilood dhaawac lugta ah. (Sport.es)
Chelsea ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo goolhayaha Wales Wayne Hennessey, 34, kaasoo ah wakiil xor ah ka dib markii qandaraaskiisa Crystal Palace uu dhacay bishii hore. (Express)
Arsenal ayaa u soo bandhigtay weeraryahankeeda Reiss Nelson, oo 21 jir ah, heshiis cusub iyadoo aragtida ah inay mar kale amaah ku dirto, xili Olympiakos ay ka mid tahay kooxaha xiiseynaya inay la wareegaan ciyaaryahanka reer England ee U21 oo horay u soo joogay Hoffenheim. (Thesun)
Weeraryahanka Liverpool ee 21 jirka reer Canada Liam Millar ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Basel isagoo ugu wareegaya £ 1.3m. (Goal)
Kooxda Leicester City ayaa soo afjartay baacsiga ay ugu jirtay weeraryahanka kooxda Celtic ee Odsonne Edouard oo 23 jir ah (Leicester Mercury)